Donation to 400 Families – We Help and Care
အိမ်ခြေ 400 အတွက် ကြက်စွပ်ပြုတ် ဆန် ဆီ ကြက်သွန် ကြက်ဥ အလှူဒါနပြုခြင်း။
(Myanmar & English Below)
Der Verein “We Help and Care (WHC)” und lokale Spender aus Myanmar haben am 07.08.2021 Hühnersuppe, Eier, Zwiebeln, Öl und Reis an 400 Familien gespendet, welche besonders hart von der Covid-19 Pandemie getroffen wurden. Wir danken allen, die sich an dieser Spendenaktion bereits beteiligen oder beteiligen wollen. Wir brauchen weiterhin Spenden, um unser Essensspendenaktion für die nächsten3Monate aufrecht halten zu können.
Informieren Sie sich auf unserer Website, dort können Sie auch direkt Spenden. https://www.wehelpandcare.org/donate/
အိမ်ခြေ 400 အတွက် ကြက်စွပ်ပြုတ်၊ဆန်၊ဆီ ကြက်သွန်၊ကြက်ဥ အလှူဒါနပြုခြင်း။
ကျွန်ုပ်တို့ We help and Care Organization (WHC) နှင့် ပြည်တွင်းပရဟိတအလှူရှင်များ စုပေါင်း၍ ယနေ့ သြဂုတ်လ၊၇ရက် (​စနေနေ့)တွင် လှိုင်သာယာရှိ ပြည်သူများအတွက် တစ်အိမ်လျှင် ကြက်စွပ်ပြုတ်၊ကြက်သွန်၊ဆန်၁အိတ်၊ဆီ၁ဘူး၊ကြက်ဥ၁ကဒ်နှုန်းဖြင့် စုစုပေါင်း အိမ်ထောင်စု ၄၀၀အား ဖြန့်ဝေလှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။
ယခုကဲ့သို့ ပြုရသော ကောင်းမှုကုသိုလ်များကြောင့် မြန်မာပြည်သူ ပြည်သားများ အားလုံး ဘေးအန္တရာယ်အသွယ်သွယ်မှ လွတ်မြောက်ကျော်လွှားနိုင်ကြပါစေလို့ ကျွန်ုပ်တို့ WHC မှ ဆုမွန်တောင်းအပ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ ယခုကဲ့သို့ လှူဒါန်းနိုင်ရန် အလှူငွေများဖြင့် ပံ့ပိုးကူညီပေးပါသော အလှူဒါနရှင် အပေါင်းကိုလည်း ကျေးဇူးအထူးတင်ပါကြောင်း နှင့် ယခုလှူဒါန်းသည်ထက် ပိုမို လှူဒါန်း ကုသိုလ်ပြုနိုင်ကြပါစေရန် မေတ္တာပို့သ ဆုတောင်းပေးအပ်ပါသည်။ သို့ပါ၍ အကူအညီ လိုအပ်နေသူများကို ဆက်လက်ပံ့ပိုးပေးနိုင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ အဖွဲ့အစည်းကို အလှူငွေထည့်ဝင်ခြင်းအားဖြင့် တတ်အားသမျှ ကုသိုလ်ပါဝင်ပေးကြဖို့ လေးစားစွာ တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။ https://www.wehelpandxcare.org/donate/
We Help and Care Organization (WHC) and local donors have handed out Chicken Stew, Onion, Rice, Cooking Oil and Egg to the household in Hlaing Thar Yar Township. We donated Chicken Stew, Onion,apack of rice,abottle of cooking oil andacarton of egg for each household in Hlaing Thar Yar Township in total of 400 households on this Saturday, 7th of August.
To support our projects, please donate directly under this website…